Ny Nexus 9X dia misy amin'ny 5 Novambra | Androidsis
LG sy Google dia nanolotra ny Nexus 5X vaovao any Madrid tamin'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety nahitantsika eny an-tananay Ity telefaona vaovao ity izay misy fampiasa tsy mampino ary nahazo endri-tsary miavaka. Ny zavatra misongadina dia ny hafainganam-pandehan'ny fakana ny sary toa ny fiatrehantsika maodely mipoaka, izay manondro ny asa napetraka amin'ity sehatra ity izay manan-danja tokoa ankehitriny ho an'ny finday finday Android.
Io endri-javatra io indrindra no tena nahasarika ny saina, manasongadina ny toetra tsirairay izay hitarika azy ho fahombiazan'ny varotra lehibe, zavatra iray izay efa niseho tamin'ny fanontana teo aloha. Ankoatry ny fahafantarana anao akaiky, azonay atao koa ny mizara ny daty fandefasana any Espana mandritra ny 9 Novambra, raha Andro faharoa no mialoha ny varotraKa eny, nitahiry vola ianao tamin'ity tranga ity, afaka mifoha maraina ianao hanery ny lakilen'ny F5 ary mividy iray, satria hanjavona afaka minitra vitsy. Ny vidiny dia resahina etsy ambany ao amin'ny kinova 16 sy 32 GB.
1 Ny fakantsary no tena tanjony
3 Ny vidin'ny Nexus 5X
Ny fakantsary no tena tanjony
Efa nitranga tamin'ny hetsika fampisehoana Google izay nanendrena ny Nexus 5X sy ny Nexus 6P ho ny fakantsary dia iray amin'ireo mpandray anjara fototra amin'ity andiany Nexus vaovao ity. Ireo tovolahy avy amin'ny Google dia nampiasa minitra ampy hanamafisana izay zavatra fantatro androany tamin'ny tanako manokana tamin'ny alàlan'ny fananako fakan-tsary izay misy sary avo lenta, araka ny hitanao ao amin'ny galeriana sary nalaina etsy ambany.
Ireo minitra ireo ihany dia nampiasaina hanehoana ireo hatsaran-toetra sy tombontsoa avy amin'ny iray amin'ireo fizarana izay mahazo ny saina indrindra amin'ireo volana ity amin'ny Android. Ny fakantsary Nexus 5X ao amin'ny aoriana dia 12,3 MP miaraka amina aperture f / 2.0 ary sensor 1.55um pixel, raha ny eo aloha kosa mankamin'ny 5MP miaraka amina sensor 1.4um izay eo ambonin'ny efijery ihany. Izy io dia mirakitra an-tsoratra amin'ny 4K ary manana fihetsika mihetsika miadana ka azo lazaina tsara fa io no fakantsary tsara indrindra misy fitaovana Nexus afa-tsy ny Nexus 6P.
Raha misy zavatra azo omena ny sisa amin'ny telefaona Nexus dia nitovy izany, ny kalitaon'ny fakantsary. Singa iray izay miavaka tampoka izao ho tonga mpanjaka amin'ity telefaona ity izay manana hatsarana lehibe hafa, amin'ny maha masoivohon'i Android 6.0 Marshmallow.
Ity kinova Android ity dia ny fitohizan'ny Android Lollipop hanatsarana ny sasany amin'ireo tombontsoa izay niaretana tamin'ny zava-baovao be loatra amin'ny hatsarana sy ny fiasa. Ireo fiasa very teny an-dàlana ireo dia niverina tamin'ny alàlan'ny fiainana bateria tsaratsara kokoa noho ny rafitra Doze, izay nomen'ilay tovolahy avy amin'ny Google hanome ny heviny amin'ny antsipiriany araka ny asehon'ireo sary etsy ambany.
Rafitra iray mifampiraharaha "Mifohaza" amin'ny telefaona amin'ny fotoana sasany mba hampifanarahana ka amin'izany dia afaka mandefa fampandrenesana sy data hafa mahaliana ny fampiharana. Ireo rindranasa ireo dia tsy maintsy havaozina mba hiasa tsara amin'ny Doze mba tsy handany mihoatra ny nandrasana. Efa nisy Nexus maro izay nitatitra ny fanatsarana ny bateria tamin'ny kinova Android 6.0 vaovao rehefa tonga tamin'ny OTA izy, noho izany dia midika ho fitsambikinana ho an'ireo terminal ireo izay tsy ho ela dia hiova amin'ity kinova vaovao ity.
Ny iray amin'ireo hatsarana hafa izay niavaka ny Nexus 5X sy Marshmallow dia izany Ankehitriny eo amin'ny Tap izay hanolotra fampahalalana momba ny tontolo amin'izay hita eo amin'ny efijery ary ahafahantsika miditra noho ny fanehoan-kevitra mety avy amin'i Google. Fahafahana miditra amin'ny karazana fampahalalana fanampiny izay hanome fahatsapana hafa ny isan'andro isan'andro amin'ny Google Now.
Ny vidin'ny Nexus 5X
Azo antoka fa tonga hatreto ianao te hahalala ny vidin'ny Nexus 5X, ao amin'ny dikan-teniny 16GB amin'ny vidiny 479 € raha ny 32GB kosa amin'ny € 529. Ny loko telo dia ireo loko samihafa azonao idirana io 2 novambra io ao anaty presale, toy ny antrasite (mainty), quartz (fotsy) ary ranomandry (manga).
5,2-inch Full HD IPS efijery (1920 x 1080/423 ppi)
Fahatsiarovana anatiny 16 na 32 GB eMMC
Fakan-tsary 12.3 MP miaraka amina aperture F / 2.0
Refy: 147 x 72.6 x 7.9 mm
Fifandraisana: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooh 4.2 / NFC / Type-C USB
Colours. Andracite, Quartz, Ice
Ny hafa: sensor 4K Video / Dual Flash / Laser Auto-focus / Fingerprint sensor
Nexus 5X izay tamin'ny fotoana nahazoako azy dia tsy nanam-potoana hitsapana an'io fakantsary io sy ny fomba fakana sary haingana be aho. Araka ny efa nolazaiko teo aloha dia toa isika izany alohan'ny fomba mavesatra fa tsy fomba mahazatra. Ny iray amin'ireo antsipiriany voalohany nalaina avy amin'ity terminal ity dia ny lanjany ambany ary ny fomba ahafahan'ny Marshmallow misitrika ny toetrany rehetra tsy misy karazana lag ary eo an-tampon'ny fampisehoana.
A terminal Tsara amin'ny lafiny rehetra Ary izany dia ho eo am-bavan'ny olona rehetra ny 2 Novambra rehefa manambara izahay fa tsy misy tarika sisa tavela, ka hoy aho fa ny lakilen'ny F5 no ho mpiray antoka aminao hanana izany ao an-trano amin'ny 9 Novambra.
Raha na inona na inona antony dia mijanona ho avo ny vidiny, 4 safidy nozarain'i Francisco namako.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Rohy » Nexus 5X, misy any Espana manomboka amin'ny 9 Novambra
Ny hoditra famantaranandro tsara indrindra ho an'ny Android Wear dia natolotry ny InstaWeather ho an'ny Android Wear